Malagasy Archives - Page 25 of 27 - Book News Madagascar
Nodimandry androany i Zafy Albert
Nodimandry androany atoandro tao amin’ny Hopital Saint-Pierre La Reunion ny Filoha teo aloha Zafy Albert, raha saika hanaraka fitsaboana noho ny fahatapahan’ny lalan-drà nahazo azy ny Alarobia lasa teo. Zafy Albert, izay Filoham-pirenena malagasy tamin’ny Repoblika fahatelo, ny taona 19993 ka hatramin’ny 1996. Dokotera ihany koa ny lehilahy ary nanamarika Read more…
147 no olona voan’ny pesta ao Toamasina
Hatramin’izao, tranga 147 no voarain’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ao amin’ny faritanin’i Toamasina. Mihamitombo hatrany ny tarehimarika, satria raha ny antontan’isa omaly dia tranga 133 no hita. Araka ny vaovao farany voaray, olona iray koa no maty androany 10 oktobra 2017.
Olona telo indray no matin’ny pesta
Olona telo indray no fantatra fa matin’ny pesta, amin’izao ora izao. Ireo fahafatesan’olona telo ireo dia mifanampy amin’ireo 42 farany. Araka ny antontan’isa nomen’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, nanomboka ny 1 Aogositra 2017, tranga 387 no hita. Tranga 277 no voalaza fa “pulmonaires” ary 106 “buboniques”.